စားပြီးသော်အတူပါသူငယ်ချင်း ဘိုကွမ်း ( ဘောဂဗေဒနှင့်အဓိပဓိလမ်းမဘက်မှပဲခူး၊စစ်ကိုင်းဆောင်ရှိရာဘက်သို့ထွက် လာပါသည်။
စိုးမြင့် (ကော့ကရိတ်)နှင့်ဝင်းနိုင်( မော်လမြိုင်)တို့ဖြစ်ပါသည်။
၀င်းနိုင်ကိုအရင်တွေ့၍အကျိုးအကြောင်းပြောရာ back roll အခန်း (၉၂) ၌ အခန်းဦးပေးထားပါသည်။
ထိုစဉ်ကအဆောင်မှူးမှာဦးမေတ္တာဖြစ်၍ hall tutor များမှာဦးသောင်းရှိန်(သချာင်္)၊ဦးမြင့်သိန်း(သချာင်္)နှင့်ဦးရေချမ်း(ရုက္ခ)တို့ဖြစ်ပါသည်။
ဆရာဦးမေတ္တာစောင့်ရှောက်စေချင်ခြင်းငှာမြ၀တီမြို့မှအမကဲ့သို့ချစ်နေရသော မမြအေးကဆရာ့ထံမြ၀တီမှဘူမိကျောင်းသား ဖြစ်သည့် ကျွန်တော်နှင့်နေ၀င်း(ယခု USA ) အားအပ်နှံထား ပါသည်။
ကျနော်ဒဂုံဆောင်နေသက်အတော်အတန်ရလာပြီးစတုတ္ထနှစ်ရောက်လာသောအခါဤအဆောင်၌မိမိတို့မှလွဲ၍နှစ်ကြီးများမရှိ တော့တာ ကြောင့် ဆရာကြီးဂိုက်ဖမ်းလာပါသည်။နောက်ပြီးFront roll ၌ single ခန်းရယူထားပြီးတစ်နှစ်သမားများကိုအပေါ်စီးကဖိဟောက် တတ်နေပြီဖြစ်သည်။
ဆရာတာ၏အခန်းမှာ ၃ ထပ်မြောက်တွင်ဖြစ်ပြီးအဆောင်၏ညာခြမ်းတွင်ဖြစ်ပါသည်။သို့ဖြစ်၍ကျွန်တော်တို့အခန်း ၆၅ မှဆူ ညံသံများသည် ဆရာတာထံမရောက်ချင်ဘဲလျှက်လေသင့်ကာရောက်နေတတ်ပါသည်။
ဆရာတာသည်မျက်နှာချိုပါသည်။နဖူးအနည်းငယ် ပြောင်သော လည်း ပြည့်ဖြိုးသောမျက်နှာ၌အေးချမ်းမှုအသွင်ဆောင်ပါသည်။
တောင်ငူဆောင်နှင့်မန္တလေးဆောင်ကြားမီးစက်(လျှပ်စစ်)ရုံးရှေ့၌၄င်း၊တောင်ငူဆောင်ဝင်ပေါက်ဝအုတ်ခုံ၌၄င်းကျနော်က ဂစ်တာတီးပြီး သူငယ်ချင်းများကလက်ခုပ်တီးသူတီး၊ဆိုသူဆို၊ကသူက ဖြစ်နေချိန်တွင်ဆရာတာကမလှမ်းမကမ်း၌ရှိနေတတ်သည်။
ဟဲ့…မင်းတို့အဆောင်မှာအရက်မသောက်နှင့်၊မိန်းမခေါ်မလာနှင့် အပြင်မှာသောက်ချင်သလောက်သောက်ပြီးမူးလာရင်ဆရာမင်းတို့ အခန်းထိ ရောက်အောင်တွဲတင်မယ်…..
ကျနော့်အခန်း ၆၅ ၌ တခုသောစနေနေ့သူငယ်ချင်းများနှင့်အရက်သောက် နေစဉ် လှည်းတန်း၌မကြာခဏတွေ့၍သန်းစောဦး
သိကြတဲ့အတိုင်းအမောင်တို့အုပ် စုသည်ထိုစဉ်က တည်းကမိန်းမချောချောပြီးမသိသူများကမိန်းမလို့ထင်မြင်ရလောက်အောင်ချောသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။
အောက်ထပ်၌ဆူညံသံကြား၍ဆရာကဆင်းလာပြီးကျနော်တို့ roll ဘက်ရောက်လာရာအပြင်၌ချောင်းနေသူများထွက်ပြေးကုန်ကြသည်။
နောက်တစ်နေ့၌ကျနော်သည်ညီမအရင်းဖြစ်သူနှင့်ကျနော့်ချစ်သူနေသောမာလာဆောင်သို့သွားရာနှစ်ဦးလုံးပင်မတွေ့ရ၍ ကင်တင်း၊မာလာ ဆောင်များထိလိုက်ရှာပါသည်။
ဘာမှတော့မပြောသွားဘူး …. လည်ပင်းမှာဇလုပ်နဲ့…….
ထိုဖြစ်စဉ်ကအမောင်ကိုမိန်းကလေးမှတ်ပြီးဆရာကအမိဖမ်းရန်အောက်ထပ်ပြေး ဆင်းပြီးသကာလတံခါးကိုသွားပိတ်ပါသည်။ အမောင်ဆင်းလာပြီးအနားရောက်မှကြည့်တော့ Gay ဖြစ်နေသဖြင့် မင်းဘယ်သူ့ဆီလာတာလဲလို့မေးရာ နာမည်သုံးလုံးသမားကိုမေ့ပြီး နာမည်နှစ်လုံးတည်းရှိသူသန်းဦးဆီလာတာပါဟုဖြေလိုက်သတဲ့။
ဆရာကနောက်မလာနှင့်တော့ဟုပြောရာ Think you sir ဟုပြောပြီးယို့ယို့ လေးထွက်သွားပါသတဲ့..
ဆရာတာမှာကားတော်တော်ရှုပ်တဲ့ကောင်တွေမိန်းမခေါ်မလာရဘူဆိုတော့ Gay ကိုခေါ်လာတယ်….